Akụkọ - Uwe Achịkwa Anyanwụ? Gịnị bụ UPF Ọgwụgwọ?
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ n'ụsọ mmiri, na-efe mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri, ọ ga-abụrịrị na ị na-eme mkpesa banyere ịmịkọta ihu na ihu igwe n'oge ọ bụla ị gbanwere. A sị ka e kwuwe, a na-atụ aro ka ị tinyeghachi sunscreen kwa awa abụọ ma ọ bụ karịa - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-asa ahụ, na-egwu mmiri ma ọ bụ na-agba ọsụsọ oge niile. Ọ bụ ezie na nke a agaghị edozi nsogbu gị niile - n'ihi na akwadoro ka ejiri ya na nhazi ihu igwe - ka anyị gosi gị uwe mkpuchi anwụ?
Huh? Kedu ka o si dị iche na naanị akwa ochie, ị na-ajụ?
Ọfọn maka ndị na-ebido ya, ọkà mmụta ọgwụ, Alok Vij, MD, na-ekwu na mgbe ị na-ekwu okwu banyere akwa na-eji okwu ahụ bụ "UPF," nke na-anọchi anya ihe nchebe ultraviolet. Na ihe eji eji anwu anwu, jiri okwu a bu “SPF,” ma obu ihe nkpuchita nchedo nke amara. “Ọtụtụ uwe elu owu na-enye gị ihe dịka ihe dịka UPF nke 5 mgbe ị na-eyi ya,” ka ọ na-akọwa.
“Ọtụtụ akwa anyị na-eyi bụ akwa na-ekweghị ekwe nke na-eme ka ìhè a na-ahụ anya lepụ anya wee banye n’ahụ́ anyị. Site na uwe ndị echedoro UPF, akwa a dị iche ma na -emepụta oge site na akwa pụrụ iche iji nyere aka mebe mgbochi megide ụzarị anyanwụ. ”
Ìhè UV nwere ike ịbanye n'ime oghere micro na akwa nke uwe mgbe niile ma ọ bụ nwee ike ịga njem site na uwe elu na-acha ọkụ. Na uwe UPF, ngọngọ ka ukwuu, na-enye gị nchebe karịa anyanwụ. N'ezie, uwe nwere UPF naanị na-echebe akụkụ nke ahụ gị nke akwa a na-emeso ya kpuchie.
Imirikiti uwe na-echebe anyanwụ na-adị ka elekere ma ọ bụ egwuregwu na-arụ ọrụ wee nwee ọtụtụ uwe elu, akwa na okpu. Ma n'ihi ọnụọgụ dị elu, ọ na-adịkarị ka ọ dị ntakịrị karịa T-shirt.